Tim Cook na-ekwu okwu na Mahadum Itali | Esi m mac
N'oge njem nleta na mba dị iche iche, onye isi Apple, Tim Cook, so na mwepụta nke iPad Pro iji nye ụwa okwu dị iche iche banyere ha na-echegbu onwe ha nke ukwuu na Apple dị ka ume ọhụrụ, ụkpụrụ na ụdị dị iche iche na ụlọ ọrụ ahụ.
N'ụzọ dị otu a ọ kwụsịla na Mahadum Bocconi nke totali iji gwa ụmụ akwụkwọ okwu lebara anya n'akụkụ ndị m kpọtụrụ aha na mbụ, ya bụ, kwuru banyere oge ya dị ka nwa akwụkwọ kamakwa na mkpa nke ọkwá ya dị ka ọnụ ọgụgụ na isi nke Apple, ebe ọ bụghị ihe niile na-eme naanị ego kama "ịhapụ ụwa ka mma karịa ka anyị hụrụ ya."
https://www.youtube.com/watch?v=sdMvKJ1TE4gTim Cook habló muy seriamente sobre la diversidad en ụlọ ọrụ na azụmahịa n'ozuzu dika enwere ike iweputa ya n'okwu nke aka ya:
Ekwenyere m na ụlọ ọrụ kachasị mma n'ụwa ga-abụkwa ndị nwere ọdịbendị kachasị dị iche iche […] ụlọ ọrụ n'ọdịnihu. Ugbu a amaara m na nke a bụ eziokwu na Apple.
O kwukwara banyere oge ọ bụ nwata akwụkwọ na echiche ya n'oge ahụ:
Mgbe m nọ n’ụlọ akwụkwọ azụmahịa, ahụghị m ihe dị mkpa, ọ bụghị mgbe ọtụtụ afọ gachara ka m gosipụtara ụdị ọrụ m na-arụ ọrụ. Ọ bụrụ na ịchọtala ụlọ ọrụ kwesịrị ekwesị, ịnwere ike iji ụkpụrụ ndị ahụ hapụ akara na ụwa ma achọtara m ya na Apple… taa Obi dị m ụtọ na ị bụ akụkụ nke ụlọ ọrụ chọrọ ịhapụ ụwa karịa ka anyị hụrụ ya.
N'aka nke ọzọ, Luca Maestri, osote onye isi ala na onye isi na-ahụ maka ego nke Apple, onye bịakwara n'okwu a, gosipụtara na Apple na-etozi ugbu a 87% ume ọhụrụ na nke ahụ ihe mgbaru ọsọ gị bụ iru 100%.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Tim Cook na-ekwu okwu banyere ume ọhụrụ, ụkpụrụ na ọdịbendị dị iche iche na njem ya gaa Italytali
Apple Music nwetara ala Spotify Premium